Porsche Dhizaini uye Acer Vhura iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS
Porsche Dhizaini uye Acer vapinda mubatanidzwa mutsva unokanganisa mashandiro ePorsche Dhizaini dhizaini dhizaini neinjiniya mindset nehunyanzvi hwekugadzira kweAcer uye ruzivo rwakadzika midzi muchikamu chepasi rose chemakomputa. Mapato ese ari maviri anovavarira kuendesa yakasarudzika, mamiriro-e-iyo-zvigadzirwa zvigadzirwa. Chisikwa chekutanga chakagadzirwa pamwe chete ibhuku repamusoro-soro rinosanganisa matekinoroji epamberi ne purist uye minimalist dhizaini yezvinhu. Iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS ine compact yesimbi-chassis mapakeji inosvika kune ichangoburwa 11th Gen Intel® Core ™ i7 processor uye NVIDIA® GeForce® MX350 GPU  ichisara chete 1.2 kg (2.65 lbs) mwenje. Kudonhedza pamusoro pekisasi chivharo che kabhoni fiber, yakasarudzika yekubata yakatorwa kubva kumakumi emakore emota yemota dhizaini iyo inokoshesa kabhoni fiber yesimba rayo risingareme uye kuita kwakanyanya. Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS yakagadziridzwa pamwe neIntel uye inosanganisira Intel Evo chikuva chakasimbiswa mamodheru  kusangana akakosha ezvakaitika zvinangwa zvekuteerera kupindirana pabhatiri, pakarepo kumuka, chaiyo-yepasirose hupenyu hwebhatiri uye nekukurumidza kuchaja, ichiita iyo yakasarudzika laptop ye kuita kuti zvinhu zviitwe.
“Nemakore anodarika makumi mana ezviitiko muindastiri, nhoroondo yeAcer yakaratidzirwa yekugona inoenderana nekuzvipira kwedu kuendesa zvigadzirwa zvakasarudzika nevatinoshanda navo. Isu tinofara kubvisa kubatana uku nePorsche Design Acer Book RS nyowani iyo inosanganisira iyo DNA yechiratidzo chedu uye inogadza zviyero zvitsva mukuita uye dhizaini, "anodaro Jan Becker, CEO wePorsche Design Group.
Jerry Kao, Co-COO weAcer, akawedzera kuti: "Chibereko chekudyidzana kunonakidza pakati peAcer nePorsche Dhizaini, iyo Porsche Dhizaina Acer Bhuku RS, musanganiswa wakaringana wemaitiro uye mashandiro evanoshanda venguva dzemumaguta. Inounza pamwe hunyanzvi hwaAcer muhunyanzvi uye Porsche Dhizaini dhizaini, zvichizogadzira chigadzirwa chakanatswa chisina kungoita zvechigarire chete, asiwo mashandiro akasarudzika pasi pehodhi. "
"Yakagoneswa neyakaomarara co-engineering rutsigiro uye yakasimbiswa kuve akanakisa malaptop ekuti zvinhu zviitwe, Intel Evo mapuratifomu anosimudza bhawa pane izvo vanhu zvavanofanira kutarisira kubva palaptop yavo," akadaro Chris Walker, Corporate Mutevedzeri weMutungamiri uye General Manager weMobile Client Platforms. , Intel. "Intel Evo yakasimbiswa dhizaini senge nyowani Porsche Dhizaini Acer Book RS inofambiswa ne11th Gen Intel Core mapurosesa ane Intel Iris Xe mifananidzo yakagadziridzwa kuendesa iko kuita, kupindura uye chaiyo-yepasirose hupenyu hwebhatiri kune azvino basa nekutamba."
Isinga tsanangurike, Iconic Dhizaini
Ichitevera Porsche Dhizaini dhizaini yekuvandudza mashandiro, iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS chirevo mukomputa yakanatswa umo maficha ese anoita chinangwa. Iyo 3k kabhoni fiber kavha inomira yakatarisana neyakagadzirwa yedhaimani-yakatemwa CNC-yakagadziriswa chassis, musiyano uyo unopa hushingi hunhu hwehunhu ukuwo uchibvumira kune inoshamisa kutakurika; iyo yuniti yacho ingori 1.2 kg (2.65 lbs) mwenje uye 15.99 mm (0.63 mu) mutete. Iwo maviri mavhavha akabatanidzwa neiyo unibody hinge iyo inokwidziridza zvishoma iyo keyboard pakuvhura kabhuku, kuvandudza kutonhora uye kugadzira yakawanda ergonomic typing ruzivo. Backlit makiyi anopa zvakakunakira achitaipa, kunyange usiku, uye girazi zvakarurama touchpad inopa multi-chiratidzo rutsigiro zvakawanda nzwisisika multitasking ruzivo.
Simba, Inonyudza Performance
Pasi pekunze kwayo, iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS yakagadzirirwa kusvika kune ichangoburwa 11th Gen Intel Core i7  mapurosesa ane Intel Iris Xe mifananidzo uye sarudzo discrete NVIDIA® GeForce® MX350 GPUs  uye 16 GB ye RAM kuona. inokwanisa kufamba mushe mushe chero chinhu chinouya mukushanda kwezuva. Inoratidzira 14-inch FHD IPS  touchscreen iyo yakafukidzwa nehutachiona hweAntimicrobial  Corning® Gorilla® Girazi, inovhara 100% yeiyo sRGB color gamut uye inosimbiswa neepamhepo-yakatetepa bezels inobvumira kunyudza 90% chiyero-kumuviri muviri. Pombi mbiri dzekupisa dzemhangura dzinovimbisa kuti mudziyo unoramba uchitonhorera uye bhatiri rinoyevedza rinogara maawa gumi nemanomwe , nepo richikwanisawo kugadzira maawa mana ekushandisa  nechaji inomhanyisa yemaminetsi makumi matatu. Dual-bhendi Intel® Wi-Fi 4 (Gig +), yakazara yakazara madoko (USB-C ™, Thunderbolt ™ 5 uye USB30 Gen 6) uye nehungwaru maficha, sekuchengetedzeka kweminwe yeminwe Windows Mhoroi, Yemazuva Ano Kumira & Kumuka paIzwi kuenderera nekunatsiridza ruzivo rwevashandisi.
Tsika Yakagadzirirwa Zvishongedzo
Yakakamurwa uye yakawanda-inoshanda nemasikirwo, iyo Porsche Dhizaini Acer Travelpack RS (mbeva mbeva, mbeva, yakatakura homwe uye kabhuku ketsamba) ishamwari yakanaka yekuperekedza  iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS. Homwe yekufamba inoitwa kubva kuECCO® PALERMO XA Leather, chinhu chinogara chakasimba chinonakidza pakubata uye chinopenya nekupenya kusingaoneki. Magineti ekukochekera anobatanidza homwe kubhuku rekunyorera iro rakagadzirwa kubva kumucheka we1680D, inodzosera mvura uye yakakwana kudzivirira bhuku remabhuku kubva mukukwaya uye kusakara-uye-misodzi inowirirana nehupenyu hwekuenda. Nemweya wekuita basa, iro rebhuku rebhuku reinosvikika rakagadzirirwa kuti rive mbiri sepombi yemushonga.
Iyo Bluetooth uye isina waya Porsche Dhizaini Acer Mouse RS inopedzisa iyo yekufamba pack. Carbon fiber inoshandiswa kusimbisa iyo yekuruboshwe-mbeva bhatani nehunhu, uye zvakare inoshandiswa kune yepasi pakavha pakavha. Izvo zvine simba zvinhu zvinovimbisa kuti mbeva ine hupenyu hwakareba uye zvakare inogara DPI switch inoita kuti vashandisi vakurumidze kuchinjika pakati pematanho matatu ekutanga ekunzwa.
Iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS premium package (i7 kabhuku, homwe yekufambisa, mbeva) ichave ichiwanikwa muNorth America kutanga kuUS $ 1,999.99; muEMEA kutanga paEUR 2,399; uye kuChina kutanga paRMB 19,999.
Iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS ichave ichiwanikwa muNorth America kutanga kuUS $ 1,399.99; muEMEA kutanga paEUR 1,799; uye kuChina kutanga paRMB 14,999.
Iyo Porsche Dhizaini Acer Mouse RS ichave ichiwanikwa muNorth America kutanga kuUS $ 109.99; uye muEMEA kutanga paEuro 99.
Iyo Porsche Dhizaini Acer Travelpack RS (mbeva mbeva, mbeva, yakatakura homwe uye kabhuku kemabhuku) ichave ichiwanikwa muNorth America kutanga neUS $ 329.99; uye muEMEA kutanga paEUR 299.
The post Porsche Dhizaini uye Acer Vhura iyo Porsche Dhizaini Acer Bhuku RS yakatanga kutanga HardwareHeaven.com.
Mutengo uye Kuwanikwa Wakatarisa: Core i7-8700K, Core i5-8600K uye Core i3-8350K
Tarisa uone kuti iyo ThinkPad X1 Carbon inofananidzwa sei neAcer's TravelMate P6